Nei Uchifanira Kutumira Kadhi Iri Zororo? Martech Zone
Nei Uchifanira Kutumira Makadhi Zororo rino
Chipiri, Mbudzi 29, 2011 Chipiri, Mbudzi 29, 2011 Douglas Karr
Vatsigiri vedu pa Zoomerang vakaburitsa ongororo yezororo uye vakawana 63% yevane chiuru vakapindura vachadaro tumira makadhi ezororo yegore ra2011 rezororo. Mune zera iro zvinyorwa, twitter, uye Facebook zvinowedzeredza ndiyo fomu huru yekuvandudzwa kwezuva nezuva zvemunhu, kadhi rezororo rinoramba riri iro goridhe mwero wenguva yegore umo vanhu vane chinangwa chekuchengetedza tsika dzichirarama.
Kushandisa fananidzo yakapusa: social media meseji ndeyemakadhi ezororo as makadhi ezororo ndeekufambidzana-kwemunhu / kumeso-kumeso kusangana, ichikwevera pane pfungwa yekuti mazororo akaderera nezvekuchengeta kuonana, asi zvimwe pamusoro pekuchengeta pakubata nevatinoda.
33 muzana vanogamuchira 10 kana mashoma makadhi ezororo gore negore
35 muzana vanogamuchira pakati pemakadhi ezororo 11-25 gore negore
50 muzana vanoronga ku vanopedza isingasviki $ 25 pamakadhi avo muna 2011
60 muzana vanosarudza Kisimusi yakanaka semashoko avo ekukwazisa
74 muzana usaronge nezve sending zvemagetsi makadhi ezororo gore rino
78 muzana vanotenga makadhi ezororo muchitoro, 7 muzana chete online uye 15 muzana vanoshandisa mubatanidzwa wevaviri
Chimwe chezvinhu zvekutanga izvo Jenn akaita paakasvika pa DK New Media yaive yekugadzira makadhi ekutumira vatengi vedu uye vatinoshanda navo. Ini pachokwadi ndakanga ndisina kumbofunga nezvazvo zvisati zvaitika… ndaive ndakabatikana uye email yaive yakapusa. Ndo izvo zvinotonhorera nezve kutumira makadhi, zvakadaro, handizvo here?
Mubvunzo: Kana chetatu chevatengi vako vakagamuchira makadhi ehoridhe gumi kana mashoma mwaka uno, ivo vanozofungei nezvekambani yako kana iwe ukatora nguva yekunyora tsamba-yakanyorwa-ruoko uchivatenda nerubatsiro rwavo?
Isu tichangogamuchira pasuru yezororo kubva kushamwari dzedu pa Dittoe PR iyo yaive yakagadzirirwa zvachose, yakarongedzwa, uye zvine hungwaru yakanyorwa isu chete. Chipo chinotonhorera chakanyatsotora nguva kugadzira uye zvinoreva zvakawanda kukambani yedu kuti vakaita izvozvo. Zviri kundiita kuti ndiwedzere mutambo wangu… ndakaisa Jenn kuti ave mutariri wayo. 🙂
Tags: makadhimakirisimasizororomakadhi ezororonguva yezororo
Schedulicity: SaaS Kugadzwa Kubatanidzwa